ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: July 2010
The man with the longest tongue in the US
ကြောက်စရာ့ သူ့ လျှာအစွမ်း...
အမေရိကန်နိုင်ငံမှ အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိ နစ်အဖန်နာစီးယက် ( အမယ်လေး နာမည်ကလည်း ကြောက်
စရာပါပဲ...) ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ လျှာအရှည်ဆုံးလူသားပါပဲတဲ့ ...
သူရဲ့ ရှည်လျားလှတဲ့ လျှာဟာ တွန့် လိမ်ကောက်ကွေးနိုင်ရုံသာမက သူ့ ရဲ့ တံတောင်ဆစ်ကိုတောင်လျှာနဲ့ 
လျှက်နိုင်သလို ဘလက်ဘယ်ရီ မိုဘိုင်းမှာလည်း လျှာနဲ့ ခလုပ်နှိပ်ပြီး မက်ဆေ့ ခ်ျ ပို့ လို့ ရပါသေးတယ်တဲ့ ....
နစ်ရဲ့ လျှာကိုအပြင်ထုတ်ပြီး နှုတ်ခမ်းအ၀ကနေတိုင်းကြည့် ယင် ၃ လက်မခွဲရှိလေသတဲ့ ဗျာ...
သူ့ ရဲ့ လျှာက ၃.၅ လက်မ ရှည်တာမို့ ယူကေက ကမ္ဘာ့ အရှည်ဆုံးလျှာပိုင်ရှင် စတီဖင်တေလာရဲ့ ၃.၈၆
လက်မရှည်တဲ့ လျှာကိုမှီဖို့ သိပ်မလိုတော့ ပါဘူး...
ဗီဒီယိုကလစ်လေးထဲမှာတော့ ကောင်မလေးတွေက သူ့ ရဲ့ လျှာကိုတွေ့ လိုက်တာနဲ့ အလန့် တကြားနဲ့ 
အော်ဟစ်ကြပေမယ့် သဘောကျကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
ထူးထူးခြားခြားရှည်လျားလှတဲ့ သူ့ လျှာဟာသူ့ ရဲ့ မျက်တောင်ကိုတောင်ထိနိုင်လောက်အောင်ရှည်လွန်း
Nick Afanasiev, 20, has the longest tongue in the United States, and can twist it around, lick his elbow and use it to text message. Nick’s tongue measures 3.5 inches from the middle of his closed top lip to the tip.
Posted by Unknown | at 1:02 AM |2comments
Labels: news: sdnn.com
Farmers with land near Nano plant turn millionaires
ကျေးဇူးရှင် ဒါတွေကိုရောလေ့ လာခဲ့ ရဲ့ လား....
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အမီဒါဘတ်ပြည်နယ် ကလယ်သမားတွေချမ်းသာသွားပြီ...
ပုံကို takepart.com ကနေရယူပါတယ်...
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ကမ္ဘာ့ တန်ဖိုးအနည်းဆုံး၊ ဈေးအပေါဆုံးကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ ဖြစ်တဲ့တာတာကုမ္ပ
ဏီရဲ့ နာနို မော်ဒယ်ကားစက်ရုံဝန်းအတွက်လျာထားတဲ့ ဆနန်းဒ် အရပ်ဒေသကမြေနေရာများရဲ့ ပိုင်ရှင်
ဖြစ်သူ လယ်သမားတွေဟာ စက်ရုံနှင့် အစိုးရကပေးတဲ့ အဆိုပါမြေနေရာများအတွက် လျော်ကြေးငွေ
များကြောင့် နေ့ ချင်းညချင်း သန်းနဲ့ ချီပြီးချမ်းသာသွားကြပါတယ်...
လယ်သမား ၁၉ ဦးဟာ ၎င်းးတို့ ရဲ့ လယ်မြေများကို မယုံကြည်နိုင်လောက်စရာဈေးနှုံးဖြစ်တဲ့ တစ်မီတာ
ပါတ်လည်လျှင် ရူပီးငွေ ၁၂၀၀ ဖြင့်ရူပီးငွေ သန်း ၄၅၀ ကို ၎င်းတို့ ရရှိမှာဖြစ်ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဂူဂျာ
ရက် ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ ယခုသီတင်းပါတ်ကပဲ အပြင်းအထန်ညှိနှိုင်းသဘောတူညီခဲ့ ကြပါတယ်...
အဆိုပါသဘောတူညီချက်ကြောင့် လယ်သမားတစ်ဦးလျှင် ရူပီးငွေ ၁၀ သန်းမှ ၇၅ သန်းအထိရရှိကြ
လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်နှစ်က ရူပီးငွေ ၂ သန်းမျှသာတန်တဲ့ လယ်မြေပိုင်ရှင်ဟာ ယခုညှိနှိုင်းဈေးကြောင့် ရူပီးငွေ
သန်း ၅၀ ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ပိုင် ဂူဂျာရက်စက်မှုဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းက ၎င်း
တို့ နှင့် လယ်သမားများ အဆိုပါ စက်မှုဇုံအတွက်လျာထားသည့် မြေနေရာများကိုလက်လွှဲပြောင်းယူခဲ့ 
ခြင်းနှင့် ပါတ်သက်ပြီး ခါလစ်ခ်ျတိုင်းမ် ( ဒူဘိုင်းအခြေစိုက်သတင်းစာ ) ကိုပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
တာတာကားကုမ္ပဏီဟာ ကိုလ်ကတ္တားက စင်ဂါအရပ်ကနေ အာမီဒါဘတ်ပြည်နယ် ဆနန်းဒ် အရပ်ကို
၂၀၀၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ကတည်းက စတင်ပြောင်းရွေ့ လာကတည်းက ထိုအရပ်ဒေသရှိလယ်
သမားများဟာ စက်မှုဇုံအတွက်မြေနေရာများကို အသည်းအသန်စုဆောင်းနေတဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ 
လက်ရှိဈေးကွက်ပေါက်ဈေးထက်အဆပေါင်းများစွာ ပေးတဲ့ ဈေးနဲ့ ၎င်းတို့ ရဲ့ လယ်မြေနေရာတွေကို
အဆိုပါ ဆနန်းဒ်ဒေသရဲ့ မြေဈေးတွေဟာ ၂ နှစ်အတွင်းမှာ ၂၅ ဆအထိခုန်တက်သွားခဲ့ ပါတယ်...
ရေအရင်းမြစ်များခန်းခြောက်ကုန်တာအပြင် တိရိစ္ဆာန်များရဲ့ မကြာခဏဖျက်စီးခြင်းခံရလို့ ထွန်ယက်စိုက်
ပျိူးခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုဖို့ အဆင်မပြေတော့ တာကြောင့် လယ်သမားများဟာ ၎င်းတို့ ရဲ့ 
လယ်ယာမြေများကို ရောင်းချဖို့ ရေကန်အသင့် ကြာအသင့် ဖြစ်နေခဲ့ ရတာပါပဲ လို့ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်
စက်မှုဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းက အဆိုပါဒေသမှာ မြေအကျယ်အ၀န်းပေါင်း ၃၅၀၀၀ ဟက်တာ
နဲ့ စက်မှုဇုံပေါင်း ၃၀ အသစ်ဖန်တီးဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်...
အဆိုပါဒေသကြီးရဲ့ ၃၅၀၀၀ ဟက်တာမှာ ၉၀၀၀ ဟက်တာသာ အစိုးရပိုင်မြေများဖြစ်ပြီး ကျန်တာတွေက
တော့ လယ်သမားတွေဆီကနေ (လျော်ကြေးပေး ) ၀ယ်ယူခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်....
" ကျွန်တော်တို့ ကိုလယ်မြေတွေလွှဲပေးတဲ့ လယ်သမားတေကို သူတို့ နေရာခြံမြေတွေမှာ ၂ နှစ်အထိ နေ
ခွင့် ပြုထားဦးမှာဖြစ်ပြီး ထိုကာလအတောအတွင်းမှာ ၎င်းတို့ အနေနဲ့ မြေနေရာ အသစ်တွေကိုရှာဖွေဝယ်
ယူပြောင်းရွေ့ အခြေချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်..." လို့ အဆိုပါစက်မှုကော်ပိုရေးရှင်းကြီးရဲ့ တာဝန်ရှိသူကပြော
တစ်ချိူ့ သောနိုင်ငံကြီးတွေမှာ တော့ အစိုးရမင်းများလိုချင်ပြီဆိုယင် ဘာမှညှိုနှိုင်းဖို့ တွေ၊ တောင်းဆို
ဖို့ တွေမစဉ်းစားပါနဲ့ ၊ ပြေးဖို့ သာပြင်ထားရတာပါပဲ...
အခုလည်း အဆိုပါတာတာကုမ္ပဏီက ရွှေပြည်ကြီးမှာ ကားစက်ရုံလာဆောက်မယ်ဆိုပါတယ်...
သူတို့ စက်ရုံနေရာအတွက် မြေကွက်ကိုဘယ်ဈေးနဲ့ များပေးမလဲမသိဘူး...
ကြုံလို့ ကိုယ်တွေ့ လေးလည်းပြောပြချင်ပါသေးတယ်....
ရန်ကုန်မြို့ စွန်က ရွာလေးတစ်ခုမှာ ( ထိုစဉ်ကတော့ ရွာပေါ့ ) မုဆိုးမ အဘွားအိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ 
လယ်မြေတွေကိုစက်ရုံကြီးတစ်ခုဆောက်ဖို့ သိမ်းခဲ့ ပါတယ်...
ထိုအဘွားရဲ့ လယ်မြေအပါအ၀င်အခြားသောသူတွေရဲ့ လယ်မြေတွေလည်းပါခဲ့ သပေါ့...
ဒါပေမယ့် အဘွားမှာကမြေတွေအများကြီးဆိုတော့ စက်ရုံရဲ့ ခြံစည်းရိုးပါတ်လည်ကာပြီးတာတောင်ထပ်
ပြီးလယ်တွေနဲ့ ဥယျာဉ်ခြံမြေကြီးတစ်ခုကျန်နေခဲ့ ပါသေးတယ်...
အဆိုပါစက်ရုံကြီးပြီးလို့ နောက် ၃/၄ ကြာတဲ့ အခါမှာတော့ စက်ရုံထပ်တိုးချဲ့ ဖို့ ဆိုပြီး ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ 
လယ်တွေနဲ့ ဥယျာဉ်ခြံကြီးကိုပါထပ်သိမ်းပါတော့ တယ်...
အဲဒါတွေအတွက်အစားပြန်ပေးတာကတော့ ...ဘာမှမပြောလောက်တဲ့ အိမ်ကွက်ကလေးနဲ့ လျော်ကြေး
တရားသဘောနဲ့ ကြည့် မယ်ဆိုယင်တော့ မိမိပြုခဲ့ တဲ့ ကုသိုလ်၊အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့် ယခုလိုမိမိပိုင်
အိုးအိမ်၊ခြံမြေ၊လယ်ယာတွေအနိုင်အထက်လုယူသိမ်းဆည်းခြင်းခံရတယ်လို့ ဆိုပေမယ့် အဘွားမှာတော့ 
ပုထုဇဉ်ပီပီ မခံစားနိုင်ခဲ့ ပါဘူး...
ခြံဝန်းအတွင်းကနေပြောင်းရွေ့ ပေးဖို့ အမိန့် တွေကို အကြိမ်ကြိမ်မလိုက်နာခဲ့ လို့ နောက်ဆုံး စစ်ကားကြီး
တွေနဲ့ စစ်သားတွေလာပြီးအဘွားတို့ မိသားစုကိုအတင်းအဓမ္မရွေ့ ပြောင်းပေးခဲ့ လိုက်ပါတော့တယ်...
စိတ်ခံစားရလွန်းသူအဘွားကတော့ သူ့ ရဲ့ အိမ်ခြံမြေအဟောင်းလေးကိုနေ့ စဉ်တောင်ဝှေးလေးထောက်
ကာ လာပြီး စက်ရုံမှူးကို အော်ဟစ်ဆဲဆိုနေခဲ့ တဲ့ မြင်ကွင်းကိုအခုထက်ထိမမေ့ သေးပါဘူး...
နောက်ဆုံးပြောင်းရွေ့ ကြရတဲ့ နေ့ ကဆို အဘွားမြေးလေးက ခြံရှေ့ မှာ တစ်ရှုံ့ ရှုံ့ ငိုနေတဲ့ ပုံလေးလည်း
( သိတယ်မဟုတ်လား ...မိန်းမလှလေးတွေငိုယင် ရင်ထဲမကောင်းဖြစ်တတ်တဲ့ ကိုယ်တို့ သဘာဝလေ....)
Farmers owning land of cheapest car, Nano, at Sanand, 30 km from here, have turned millionaires overnight.
Nineteen ryots have struckahard bargain with the Gujarat government which has agreed to pay them this weekawhopping Rs 450 million for their land at the incredible rate of Rs 1,200asquare metre.
An official of the state-owned Gujarat Industrial Development Corporation (GIDC), which is acquiring plots from the sons of the soil for its future industrial estates told Khaleej Times thatafarmer's 10-acre land which was worth Rs2million two years ago could now fetch him Rs 50 million.
Each farmer will receive cheques with amounts ranging from Rs 10 million to Rs 75 million.
Ever since Tata Motors shifted the Nano project from Singur near Kolkata to Sanand near Ahmedabad in October 2008, farmers in the region have been grabbing the offers made by the state government which has desperately started acquiring land from the tillers at rates much higher than prevalent market prices."Land prices in Sanand have shot up nearly 25 times in less than two years.
Farmers are also ready to sell their land as due to water shortage, they cannot depend on agriculture round the year what with animals damaging their crops now and then," said the official.
GIDC plans to set upahuge land bank of 35,000 hectares to set up 30 new GIDC estates. Of the 35,000 hectares state-wide, 9,000 hectares are government land, while the rest of it is being bought from farmers.
"The farmers who sell their land will be allowed to stay in their land for as long as two years. By that time, they will buy new land and settle down", the GIDC official said.
Posted by Unknown | at 12:34 AM | 1 comments
စကားဆိုတာချဲ့ ကားတတ်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောရှိတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း အောက်ပါ ဟာသ
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာလည်း ရွာတောင်ပိုင်းက ဖားပြုတ်ကိုက်တယ် ဆိုတဲ့ စကားဟာ ရွာမြောက်
ပိုင်းလည်းရောက်ရော တရုတ်ရိုက်တယ် ဆိုတာအထိဖြစ်တတ်တယ်လို့ ဥပမာပေးပုံခိုင်းပြောတတ်ကြ
ဒီပုံမှာလည်း ကုမ္ပဏီရဲ့ အဆင့် အမြင့် ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ထံမှ ညွှန်ကြားလွှာတစ်ခုကို အောက်အဆင့် ဆင့် တွေ
ကထပ်မံပြီး ညွှန်ကြားလာလိုက်တာ နောက်ဆုံး အဓိပ္ပါယ်တွေတစ်လွဲဖြစ်ကုန်တာလေးကို ဟာသမြောက်
စွာနဲ့ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း တင်ပြထားပါတယ်...
ရွှေဖော့ ရိုးနဲ့ ဆုံးမခိုင်းတာ တစ်ခါတည်းသေအောင် စောင်မကြည့် ရှုလိုက်သလိုပါပဲ...
ကလစ်နှိပ်ပြီးကြည့် လို့ ရအောင်ပြန်ပြင်ထားပါတယ်...
Posted by Unknown | at 1:42 AM |4comments
The man, 40, who measures only 2ft 6in and is bidding for title of world's smallest man
အသက် ၄၀နှစ်၊ အရပ် ၂ ပေ ၆ လက္မ...ဖြစ်ချင်တာက ကမ္ဘာ့ အသေးဆုံးလူသား...
လူပုလေး ( အဲလေ...လူပုကြီး ) နှင့်သူ့ မေမေ...
Huang Kaiquan, who is only 2ft 5.91in and pictured here with mother Cheng Fuxiu, is bidding for the title of world's smallest man
တရုတ်နိုင်ငံမှ အသက် ၄၀ အရွယ်ရှိ အရပ် ၂ ပေ နှင့် ၆ လက်မသာရှည်သည့် လူပုကလေးက ( အမှန်
တော့ လူပုကြီးလို့ ခေါ်ရမှာပေါ့ လေ...) ကမ္ဘာ့ ခန္ဓာကိုယ်အသေးဆုံးလူသားဘွဲ့ ဆွတ်ခူးနိုင်ရန် တောင်း
၎င်းနှင့် တစ်နိုင်ငံတည်းသား ကမ္ဘာ့ ခန္ဓာကိုယ်အသေးဆုံးဘွဲ့ ပိုင်ရှင်ယခုနှစ်အစောပိုင်းမှာ သေဆုံးသွားခဲ့ 
ပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံ၊ စီချွမ်ပြည်နယ်၊ ဟီကျန်းဒေသမှ လူပုဟွမ်ကိုင်ချွမ်း ကထိုစံချိန်ကိုတင်နိုင်ဖို့ အ
ကွယ်လွန်သွားရှာပြီဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာ့ အသေးဆုံးလူသား ဟေပင်ပင်း
ကမ္ဘာ့ အသေးဆုံးလူပုကလေး ဟေပင်ပင်းဟာ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်မှာပဲယခုနှစ် မတ်လမှာသေဆုံး
( ကိုပု ) လို့ အများကအရပ်ထဲမှာခေါ်တဲ့ ဟွမ်ဟာ ဟေပင်ပင်းထက် ၁.၄ ဆင်တီမီတာပဲ အရပ်ပိုရှည်
အသက် ၃ နှစ်သားကလေးတစ်ဦးလောက်သာ ကိုယ်အလေးချိန် ၂၆ ပေါင်ပဲရှိတဲ့ အသက် ၄၀ အရွယ်
ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဟွမ် ကယခုတော့ ထို ( ကမ္ဘာ့ အသေးဆုံးလူသားဘွဲ့ ) ကိုဆွတ်ခူးနိုင်လိမ့် မယ်လို့ မျှော်လင့် 
၎င်းရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ ချင်ဖူရှူး ရဲ့ အဆိုအရ ဟွမ် ကို ၁၉၇၀ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာမွေးဖွားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
သူဟာမိသားစုရဲ့ ဒုတိယမြောက်ရင်သွေးဖြစ်ပြီး တစ်ဦးတည်းသောသားယောကျာင်္းလေးလည်းဖြစ်ကာတစ်
ခြားမိသားစုဝင်တွေကတော့ ပုံမှန်ပဲအရပ်မြင့် ကြပါတယ်...
ဟွမ်အနေနဲ့ ပုံမှန်ဘ၀မျိူးကိုဘယ်တော့ မှမရနိုင်တော့ ပေမယ့် ယခုအသက် ၄၀ အထိတိုင်အောင် ၎င်းရဲ့ 
မိခင်က သူ့ ကိုချီပိုးထွေးပွေ့ နေနိုင်သေးတာကိုတော့ ဖြေသိမ့် နိုင်ပါသေးတယ်...
" အမေက ကျူပ်ငယ်ငယ်ကတည်းက အမြဲချီပိုးခဲ့ တာဖြစ်ပြီး အခုထက်ထိလည်း ကျူပ်က ( အရွယ် ) ငယ်
သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကတော့ ကြီးပြင်းထွားကြိုင်းလာကြလို့ သူတို့ ရဲ့ မိဘတွေက မချီပိုးနိုင်တော့ ပေ
မယ့် ကျူပ်ကတော့ ဘယ်လိုမှ မထွားလာတော့ တာမို့ အမေက ကျူပ်ကိုနေ့ တိုင်းချီပိုးနေတာကိုခံနေရ
ကျူပ်က အရပ်ပုပုလေးမို့ လူတွေက ကျူပ်ကိုကလေးလေးတစ်ယောက်နဲ့ အမြဲမှားလေ့ ရှိကြပြီး အခုဆို
ခေါင်းပါပြောင်နေတော့ တာမို့ ကလေးလေးနဲ့ ပိုပြီးတူလာခဲ့ ပါပြီ..." လို့ သူက ရယ်မောနောက်ပြောင်
စီချွမ်ပြည်မှ လူပုလေးကလည်း ကမ္ဘာ့ အသေးဆုံးလူသားပါပဲတဲ့ ....
Following the death of former record-holder He Pingping earlier this year, Huang, from Sichuan province, has stepped forward hoping to claim the title
အသက် ၃၀ အရွယ်မှာ နာမကျန်းဖြစ်ခဲ့ လို့ သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကနေအနားယူခဲ့ တဲ့ ဟွမ် ဟာ အသက်
၅၈ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မိခင်ဖြစ်သူနှင့် အတူ တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း စီချွမ်ပြည်နယ်မှာ နေထိုင်လျှက်ရှိပါတယ်...
" သူ့ ကိုချီရတာမလေးပါဘူး...အခုဆိုအသက်ပိုကြီးလာတာနဲ့ အမျှ ပိုပြီးတော့ တောင် ပေါ့ လာပါသေး
တယ်..." လို့ မိခင်ဖြစ်သူကပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
" သူအသက် ၃ နှစ်သားလောက်မှာပဲ ရှေ့ ဆက်မကြီးထွားတော့ ဘူးဆိုတာကျွန်မတို့ သိခဲ့ ရလို့ သူ့ ကို
ဆေးရုံပေါင်းစုံအောင်ခေါ်သွားခဲ့ ပေမယ့် ဘယ်လိုမှအကျိူးမထူးခဲ့ ပါဘူး...
ရွာကလူတွေကတော့ သူ့ ကိုစွန့် ပစ်လိုက်ဖို့ အကြံပေးခဲ့ ပေမယ့် ကျွန်မတို့ မလုပ်ရက်နိုင်ခဲ့ ကြပါဘူး...
သူ့ အသက် ခြောက်နှစ်အရွယ်မှာ သူ့ ရဲ့ ဖခင်သေဆုံးသွားခဲ့ ကတည်းက မိသားစုအခြေအနေလည်း
ကျွန်မဘာသာကလေးတွေကိုပြုစုစောင့် ရှောက်ပေးရ၊ ငွေလည်းရှာရနဲ့ မို့ ဘ၀ဟာ အတော်ခက်ခဲလှ
ဒါပေမယ့် သားလေးဟာ အမြဲပဲလိမ္မာခဲ့ ပါတယ်...သူဟာတံမြက်စည်းလှည်းတာကစလို့ အိမ်မှာအမြဲပဲ
တတ်နိုင်သလောက် ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးခဲ့ ပါတယ်... " လို့ မိခင်ဖြစ်သူ ချန် ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်....
" ကျူပ်ကတော့ အမေနဲ့ ဘယ်တော့ မှမခွဲပဲ အမြဲနေသွားမယ့် အမေ့ သားပဲဖြစ်လိမ့် မယ်လို့ ထင်ပါတယ်...
ကျူပ်အရပ်ပုလို့ လူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ချင်းမစာရက်စက်တတ်ကြပေမယ့် ကိုယ့် ကိုအမြဲချစ်နေတဲ့ အမေ
တစ်ယောက်ရှိနေတာနဲ့ တင် လုံလောက်ပါပြီ..." လို့ ဟွမ် ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
A 40-year-old Chinese man who measures only 2ft 6in (76cm) is bidding for the title of the world's smallest man.
Following the death of the former record-holder earlier this year, Huang Kaiquan, from Hejiang County, Sichuan province, has stepped forward hoping to claim the record.
He Pingping was the world's smallest man until his death in March this year at the age of just 21.
Huang, or 'short brother' as he is known locally, is only 1.4cm taller than Pingping.
The 40-year-old, who weighs just 26 lb (12kg), the same asathree-year-old, is now hoping to claim the record.
According to his mother Cheng Fuxiu, Huang was born in February 1970. He is the second child and only son and all the other family members are of normal height.
Huang may never haveanormal life but he takes consolation from the fact that even at 40 his mother can still pick him up foracuddle.
He said: 'My mother always picked me up when I was little and as I'm still little she can still manage it.
'All my friends grew too big to be picked up, but I never grow any bigger which means that every day I can still getacuddle from my mum.
'People have always mistaken me foratoddler because of my height - and now I'm going bald I look even more likeababy,' he joked.
Former actor Huang, who retired aged 30 after falling ill, lives with his 58-year-old mother in southwest China's Sichuan province.
'He's not so heavy - he's actually lighter now that he's getting older,' she said.
'When he was three we realised he did not seem to be growing and we took him to various hospitals which were unable to help us. People in the village advised us just to abandon him but of course we didn't.
'It got really bad when he was just six-years-old and my husband died. I had the children to raise and had to earn money as well and it was very difficult.
'He has always beenagood boy though. He tries to help around the house and he sweeps the floors and does whatever else he can,' Cheng explained.
Huang added: 'I guess I will always be her little boy. And although people are often cruel to me because of my height, it is good to know that there is somebody who loves me.'
Posted by Unknown | at 2:39 PM | 1 comments
Woman fined for saying ex-hubby is impotent
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ အမျိူးသမီးတစ်ဦးဟာ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဟောင်းဖြစ်သူအားယောကျာင်္းပီပီ စံချိန်မမှီသူဟု
( ပန်းသေ၊ပန်းညှိုး ဖြစ်နေသူ ) စွပ်ဆွဲပြောဆိုခဲ့ မှုဖြင့် တရားရုံးတော်တစ်ခုက သူမအားကြီးလေးသော
ဒါဏ်ငွေပေးဆောင်စေခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မတ္တရာပရာဒက်ရ်ှပြည်နယ် အလယ်ပိုင်းက တရားရုံးတစ်ခုမှာ တရားသူကြီးဖြစ်သူ ဂျဂဒစ်ရှ်
ပရာဆတ်ပါရာရှာက ထိုအမျိူးသမီး ဗန်ဒနာဂါဂျာ ကို အသရေဖျက်မှုဖြင့် သူမအားတရားဆွဲဆိုထားသည့် 
ခင်ပွန်းဟောင်း ဟမန့် ချဟာလိုတာအား လျော်ကြေးငွေ ရူပီး ၂ သိန်း ( ဒေါ်လာ ၄၂၇၆ ) ပေးစေရန်လွန်ခဲ့ 
တဲ့ တနင်္လာနေ့ ကအမိန့် ချမှတ်လိုက်ပါတယ်...
ယခုချမှတ်လိုက်တဲ့ ဒါဏ်ငွေပမာဏဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံက သန်းပေါင်းများစွာသောလူတွေရဲ့ တစ်နှစ်စာဝင်
Cartoon by Martin Holt, www.shadma.com
ဗန်ဒနာ ဟာ ဟမန့် ကိုလွန်ခဲ့ တဲ့ ကိုးနှစ်ခန့် ကလက်ထပ်ခဲ့ တာဖြစ်
ပြီး သုံးလအကြာမှာသူ့ ကိုထားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်လို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသ
မာဓိသင်းစာ ကဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်...
ဟမန့် နှင့် သူ့ ရဲ့ မိဘများ (သူမရဲ့ ယောက္ခတွေ ) ဟာသူမကို လက်
ဖွဲ့ ပစ္စည်း ( အိန္ဒိယထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရ မိန်းကလေးဘက်ကတင်
တောင်းရပါတယ်...) နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ထိခိုက်နစ်နာအောင်ပြုမူပြော
ဆိုခဲ့ တယ်ဆိုပြီး အားလုံးကိုတိုင်ကြားခဲ့ ပါတယ်...
ဒါပေမယ့် ဒေသဆိုင်ရာတရားရုံးက ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ ထိုစွပ်စွဲချက်တွေအားလုံးကနေ လွတ်ငြိမ်းခွင့် ပြုခဲ့ 
၎င်းနောက်မှာတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာ ကျားသဘာဝမစွမ်းဆောင်နိုင်တာကြောင့် တူနှစ်ကိုယ်ရွှေလက်တွဲ
ပြီးချစ်ပွဲမ၀င်နိုင်ခဲ့ တာမို့ ဗန်ဒနာ ဟာ ဟမန့် နဲ့ ကွာရှင်းပေးဖို့ လျှောက်ထားတောင်းဆိုခဲ့ ပါတယ်...
တရားရုံးကလည်း ၎င်းတို့ နှစ်ဦးကိုကွာရှင်းခွင့် ပြုခဲ့ ပါတယ်... ( ထိုဆရာရဲ့ ဝေဒနာသေချာလို့ နေမှာပေါ့ ...)
၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာတော့ ဟမန့် ဟာ သူ့ ကိုညှိုးနွမ်းခွေလျော့ တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ အသရေဖျက်ပါတယ်
ဆိုပြီး ဗန်ဒနာ ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့ ပါတော့ တယ်...
သူမရဲ့ ပြောဆိုစွပ်စွဲမှုတွေကြောင့် သူ့ အနေနဲ့ အချစ်သစ်နောက်တစ်ခုထပ်မလှမ်းနိုင်တော့ တဲ့ အဖြစ်သို့ 
ရောက်ခဲ့ ရပြီး သူ့ ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာလည်းထိခိုက်နစ်နာခဲ့ ရတယ်လို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
သူ့ လိုပဲသူများတွေဒုက္ခမရောက်ရအောင်လည်းစေတနာနဲ့ ပြောပြရသေးတယ်...
ဒါကြောင့် ပြောတာနေမယ်...စေတနာသည်လူတိုင်းနဲ့ မတန် ဆိုတာ
A woman has been slapped withaheafty fine byacourt in India after accusing her husband of impotence.On Monday, judge Jagdish Prasad Parashar in central Madhya Pradesh ordered Vandana Gurjar to compensate 200,000 rupees (RM13,668) to her ex-husband Hemant Chhalotre inadefamation suit filed by the latter.The amount of the fine far exceeds the annual income of millions living in India.
Vandana had married Hemant nine years ago but left him just after three months, the Press Trust of India reported.
She lodgedacomplaint against Hemant and her in-laws, claiming that they had harassed her for dowry butalocal court acquitted the accussed of all charges in 2004.
Then, Vandana filedapetition to divorce Hemant, claiming that she could not have conjugal bliss with the latter as he was impotent.
The court granted them divorce.
In 2006, Hemant filedadefamation suit against Vandana for the impotence allegation.
He said the accusation had rendered him “unmarriageable” and sullied his prestige.
Posted by Unknown | at 12:57 PM | 1 comments
A dam big project: Incredible images of construction work on 1,900ft-long Hoover Bridge
အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ပေပေါင်း ၁၉၀၀ ရှည်သည့် ဟူဗာတံတားကြီးတည်ဆောက်ရေးမြင်ကွင်းများ...
Spectacular structure: The Hoover Dam Bridge rises from the river banks in the middle stages of the £160m project
လာမည့် စက်တင်ဘာလမှာ အပြီးသတ်တော့ မည့် အမေရိကန်နိုင်ငံ ဟိုဗာရေကာတာအနီးက
ပေပေါင်း ၁၉၀၀ ရှည်လျားတဲ့ တံတားကြီးရဲ့ ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်...
ဒီတံတားကြီးပြီးဖို့ ၁၂ နှစ်ကြာစီမံကိန်းများရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ ရပြီး ငါးနှစ်ကြာမျှအချိန်ယူ
တံတားကြီးကိုတော့ " မိုက်အိုကာလဂန်ပက်တေလ်မန် အမှတ်တစ်ရ တံတား " လို့ ခေါ်ဆိုမှာဖြစ်ပြီး
ယခုအခါမှာတော့ တည်ဆော်ကမှုလုပ်ငန်းတွေ နောက်ဆုံးလက်စသတ်နေပါပြီ...
မိုးမြင့် ထက်က တံတားကြီးမို့ အောက်ကိုတောင်မကြည့် ရဲလောက်အောင်ပါပဲ...
Don't look down: Workers useacrane to construct the top of the bridge's arch during the large-scale project
ကိုလိုရာဒိုမြစ်ရဲ့ အထက်ပေပေါင်း ၈၉၀ မှာတည်ရှိပြီး တည်ဆောက်ပြီးစီးတဲ့ အခါမှာတော့ အရှည်က
၁၉၀၀ ပေဖြစ်ပြီး ထောက်ကန်ထားတဲ့ အခုံးတိုင်အရှည်ဆုံးက ပေပေါင်း ၁၀၈၀ ဖြစ်ပါတယ်..
နီဗားဒါးနှင့် အရီဇိုးနားပြည်နယ်တွေကိုဓါတ်အားပေးနေနေတဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ကြီးတည်ရှိရာလှပ
ခန့် ငြားတဲ့ ဟူဗာရေကာတာကိုနောက်ခံထားပြီးတည်ဆောက်ထားတဲ့ အဆိုပါတံတားကြီးဟာအမေရိ
ကန်ပြည်ထောင်စုမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ သမျှတံတားများအနက် ကွန်ကရစ်နှင့် စတီးသံမဏိတွဲပြီးတံတား
အောက်ခြေဒေါက်တိုင်ခုံးပြုလုပ်ခဲ့ တဲ့ ပထမဦးဆုံးတံတားလည်းဖြစ်ပါတယ်...
စုစုပေါင်းကုန်ကျစားရိတ် ဒေါ်လာ သန်း ၂၄၀ ခန့် ကုန်ကျတဲ့ အဆိုပါတံတားကြီးဟာ နေ့ စဉ်ကားအစင်း
ရေ ၁၇၀၀၀ ခန့် ဖြတ်သန်းလိမ့် မယ်လို့ မျှော်မှန်းထားပြီး အလွန်ယာဉ်အသွားအလာများပြားထူထပ်လှ
တဲ့ပြည်ထောင်စုအဝေးပြေးလမ်းမကြီး အမှတ် ၉၃ ကိုယာဉ်အသွားအလာအသုံးပြုမှုလျော့ နည်းစေဖို့ စီ
ယခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ ဆည်ကြီးရဲ့ ဘောင်ပေါ်က ကားလမ်းကိုလည်း ပိတ်ပစ်စေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်...
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နီဗားဒါးနှင့် အရီဇိုးနားပြည်နယ်တွေကို အများဆုံးဆက်သွယ်ဖြတ်ကူးနိုင်တဲ့ မြစ်ကူး
တံတားနေရာဖြစ်လို့ အဆိုပါရေကာတာကြီးဟာ အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုခံနိုင်ဖွယ်ရာနေ
ရာအဖြစ်စိုးရိမ်ဖွယ်မို့ ကုန်တင်ကားများကို တော့ ရေကာတာကြီးအပေါ်ကလမ်းမှ ဖြတ်သန်းသွားလာ
ခွင့် ပိတ်ထားခဲ့ ပါတယ်...
၁၉၃၆ ခုနှစ်ကဆောက်လုပ်ခဲ့ တဲ့ ရေကာတာကြီးပေါ်ကနေ ကားတွေ လာမယ့် နိုဝင်ဘာကစပြီးတော့ 
ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်တော့ မှာမဟုတ်တော့ ပါဘူး....
အထူးမီးဆိုင်းမျှော်စင်ကြီးတွေနဲ့ တပ်ဆင်ပြီးဆောက်လုပ်တာမို့ နေ့ ရောညပါမနေမနား
Let there be light: Night time work on the Hoover Bridge continues unabated thanks to huge lighting towers
T.T International ကုမ္ပဏီမှ ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးတည်ဆောက်ခဲ တဲ့ တံတားကြီးမှာ ယာဉ်သွားလမ်းကျယ်ကြီး
လေးခုပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး ရေကာတာကြီးနဲ့ မိဒ် ( ရေကာတာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရေကန် ) ရေကန်ကြီး
တို့ နဲ့ သဟဇာတဖြစ်ပြီးလိုက်ဖက်အောင် စိတ်ကူးယဉ်တည်ဆောက်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ဧရာမ သံမဏိ စတီးကြိုးဆိုင်းကြီးတွေနဲ့ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်...
တံတားကြီးကို အလုပ်သမားပေါင်း ၃၀၀၀ ခန့် ပါဝင်တည်ဆောက်ခဲ့ ပြီး ပေပေါင်း ၂၃၀၀ ရှည်တဲ့ စတီး
သံမဏိကြိုးရှည်ကြီးများကို အမြင့် ပျံဝန်ချီစက်စနစ်နဲ့ အသုံးပြုခဲ့ ကြတာဖြစ်ပါတယ်...
ခန့် ငြားလှတ့ အောက်ခံအားဖြည့် အခုံးကြီးများကို အရှည် ၂၄ ရှိ ကွန်ကရစ်နှင့် စတီးခုံးပေါင်း၁၀၆ ခု
တို့ နဲ့ ဖန်တီးပြုလုပ်ခဲ့ တာလည်းဖြစ်ပါတယ်...
ဤတံတားကြီးကို အမေရိကန်နိုင်ငံအပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု ၉/၁၁ အပြီးမှာ ၎င်းရဲ့ အောင်မြင်
ပြီးဝင်ငွေကောင်းလှတဲ့ အားကစားသမားဘ၀ကိုစွန့် လွှတ်ပြီး တပ်မတော်ထဲဝင်ရောက်ခဲ့ အာဖဂန်
နစ္စတန် စစ်မြေပြင်မှာ မတော်တစ်ဆမှားယွင်းစွာပစ်ခတ်မိလို့ သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ အမေ၇ိကန်ဘော
လုံးကစားသမားအကျော် ပက်တေလ်မန် နှင့် နီဗားဒါးပြည်နယ်အုပ်ချူပ်ရေးမှူးဟောင်း မိုက်အိုကာလဂန်
တို့ ကို ဂုဏ်ပြုပြီးမည့် ခေါ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ဒီတံတားကြီးတည်ဆောက်နေတဲ့ ရှုမောဖွယ်ဓါတ်ပုံများကို အသက် ၃၈ နှစ်ရှိ ဂျေမီစတီးလင်းဟာတိုး
ရစ်စ်တစ်ယောက်အနေနဲ့နီဗားဒါးကနေ အရီဇိုးနားပြည်နယ်ကိုအသွား ဟူးဗာရေကာတာကြီးကိုရောက်
ခဲ့စဉ်ရိုက်ကူးဖို့ စိတ်ကူရခဲ့ ပြီးထိုနေရာမှာ ညအိပ်နားခိုကာ ရိုက်ကူးခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
Now the giant construction project which is on schedule to be completed in September can be seen in all its glory inaseries of stunning photographs.
Rising 890 ft above the Colorado River, when finished, its total length will be 1,900 ft, with its longest supported span running to 1080 ft.
Built in the shadow of the iconic Hoover Dam, which powers most of states Nevada and Arizona, the construction is the first concrete-steel composite arch bridge built in the United States.
With costs estimated to run to £160 million, the bridge is designed to take the pressure off the congested US Highway 93 and is expected to carry 17,000 trucks and cars daily.
It will also allow the roadway that runs on top of the Hoover Dam to close.
Having long been the most accessible river crossing between Nevada and Arizona, the dam is thought to be at risk ofaterror strike, with trucks already banned from crossing.
In November, cars will no longer be able to cross the dam which was built in 1936.
Designed by T.Y Lin International, the bridge will be four lanes wide and is designed to match the style of the dam shadowing it, which holds back artificial Lake Mead.
Around 3,000 workers have helped construct the bridge using 2,300 feet long steel cables held aloft bya'high line' crane system.The distinctive arches are made up of 106 concrete and steel arches, each one 24ft-long.
The bridge is due is named after Mike O'Callaghan,aformer Nevada Governor and Pat Tillmanaformer All Star American Football player who left his lucrative career and enlisted in the army after 9/11.
He was killed inafriendly fire incident in Afghanistan.
Documenting the last 18 months on camera has been Santa Fe resident Jamey Stillings, 38.
'I was driving onaroad trip through Nevada across to Arizona when I took in the Hoover Dam asatourist,' said Jamey, who has been photographing the Bridge since March 2009.
'I came across the construction of the bridge without warning and it capturedapiece of my imagination.'
Deciding to stay foranight nearby, Jamey set about formingaproject to photograph the bridge as it's put together step-by-step.
Posted by Unknown | at 5:05 AM |0comments
သိဒ္ဓိရှင် ဆိုင်းဘာဘာရဲ့ လှည့် ကွက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ ပြီ...
ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်ကပင်ထိုနာမည်ကိုရင်းနှီးနေခဲ့ ရသည်...
ဘာတွေဘယ်လိုစွမ်းသည်တော့ မသိ ထိုဂုရုကြီးကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်ရုံမျှဖြင့် ရောဂါတွေပျောက်၊ ချမ်းသာ
ရောက်သည်ဟုဆိုကာ သူ့ ဓါတ်ပုံ၊ သူ့ ဂါထာတွေ တွင်တွင်ရွတ်ကြသည်မှာ တအုံးအုံး...
ကျွန်တော်ကတော့ ထိုစဉ်တုံးက ငယ်သေးသည်ကတစ်ကြောင်း၊ အခမဲ့ ကြေငြာသူတွေနှင့် တိုက်ရိုက်မတွေ့ 
ယနေ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ပင် ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြင့် နည်မည်ကျော်ကြားထင်ရှားနေ
သည့် ဗေဒင်အကျော်အမော်ဆရာမ တစ်ဦးပင်လျှင် သူမ၏ဆရာကြီးနှင့် အတူ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ သွားရောက်
ခဲ့ စဉ် အဆိုပါ ဆိုင်းဘာဘာကြီးကို ကိုယ်တိုင်တွေ့ ခွင့် ရခဲ့ ပြီး ဘာဘာကြီး၏ကောင်းချီးပေးမှုခံခဲ့ ရသည်ဟု
သို့ သော် ....
အသက်နှစ်ဆယ်လေး၊ နှစ်ဆယ့် ငါးအရွယ်လောက်တွင်တစ်ခါ ထိုဂုရုကြီးကိုအခမဲ့ကြေငြာပေးသူတစ်ဦးနှင့် 
တွေ့ ခဲ့ ရပါတော့ သည်....
ထိုသူကား မိမိဘ၀၏ လေးစားအားကျရသူများထဲတွင်တစ်ဦးအပါအ၀င်ဖြစ်ခဲ့ သည့် အင်္ဂလိပ်စာဆရာတစ်ဦး...
မိမိယနေ့ ဤကဲ့သို့ အင်္ဂလိပ်စာလေးမတောက်တစ်ခေါက် ဖတ်တတ်နေသည်က ဆရာ့ ကျေးဇူးများပင်...
ထိုစဉ်က မိမိအင်္ဂလိပ်စာကို အသဲအမဲလေ့ လာသင်ယူနေချိန်...
ပထမတော့ ထိုစဉ်ကာလထုတ်အင်္ဂလိပ်စာစာစောင်များတွင် ကြေငြာနေသည့် ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းတွင်သင်
တန်းဖွင့် ထားသည့် အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာကြီးတစ်ဦးထံတွင် သင်တန်းတက်ဖြစ်သည်...
ထိုဆရာကြီးကား စကားပြောတော့ ကောင်းလှသည်... ၎င်းအင်္ဂလိပ်စာနှင့် ပါတ်သက်လျှင်မည်သို့ တော်
ကြောင်း၊ တတ်ကြောင်း ၊ ၎င်းကို ဆရာတက်တိုးကပင်ချီးကျူးစကားဆိုကြောင်းစသည်ဖြင့် ရွှမ်းရွမ်းဝေအောင်
အင်္ဂလိပ်စာသင်ရာတွင်မူ စာစောင်တစ်ခုတွင် ၎င်းရေးသားဖော်ပြနေသည့် ဆောင်းပါးများကို ဖတ်ပြရုံသာ...
စကားပြောလည်းဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်သင်သည်မဟုတ်၍ တစ်လနှင့် ထိုသင်တန်းမှ ထွက်လာခဲ့ လေ
၎င်းနောက် မိမိ၏အင်္ဂလိပ်စာကျေးဇူးရှင်ဆရာနှင့် တွေ့ ရခြင်းဖြစ်သည်....
ဆရာ့ ကို မိမိဖတ်သောအင်္ဂလိပ်လေ့ လာသင်ယူရေးဆိုင်ရာမဂ္ဂဇင်းများတွင် ဆရာရေးသောဆောင်းပါးများ
ဆရာကား သူ၏သင်တန်းကိုမည်သည့် စာစောင်တွင်မျှမကြေငြာ.....တစ်နေ့ မိမိအင်္ဂစာလေ့ လာရေးဆိုင်
ရာစာစောင်တစ်ခုဝယ်နေစဉ် ( ထိုစာစောင်တွင်တော့ ဆရာ့ ဆောင်းပါးများပါတတ်ပါသည်...) ထိုစာစောင်
ကိုပင်ဝယ်နေသည့် ရွယ်တူကျောင်းသားတစ်ဦးကပြောပြ၍ဆရာ့ သင်တန်းကိုသိရှိကာ သွားရောက်သင်
ဆရာကားဟိတ်ဟန်မရှိ၊ ပကတိရိုးသားစွာပင် သူတတ်သမျှသင်ကြားပေးပါသည်...သင်တန်းကြေးလည်းထို
စဉ်က ( မြို့ လည်တွင် သင်သည်ဖြစ်သော်လည်း ) ရန်ကုန်တစ်မြို့ လုံးတွင် အနည်းဆုံးပင် ဖြစ်ပေလိမ့် မည်...
မိမိဆရာ့ ကိုကြည်ညိုမိသည်က တစ်ခြားသင်တန်းတွေလို သုံးလပြတ်၊ လေးလပြတ် စတာတွေမလုပ်ကိုယ့် 
အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေးကို ကိုယ့် ဘာသာကိုယ်ဆုံးဖြတ်စေကာ ရေရှည်သင်ယူလေ့ လာနိုင်ရန်လမ်းပြ
သင်ကြားပြသနေစဉ် ခက်ခဲသောအင်္ဂလိပ်စာလုံးများ၏အဓိပ္ပါယ်ကို မသိပါကဟန်ဆောင်ရောမချပဲ အနီးရှိ
ထို့ ကြောင့် ပင်လျှင် မိမိကိုယ်တိုင်အဘိဓါန်သုံးသည့် အကျင့် ကိုရခဲ့ ပါသည်...ကိုယ်မသိသည့် စာလုံးကိုရော
မချတတ်သည့် အကျင့် ကောင်းကိုရခဲ့ ပါသည်...
တစ်နေ့ တော့ဆရာ့ သင်တန်းတွင် ကြေငြာစာရွက်လေးများဝေပါသည်...ထိုသိဒ္ဓိရှင် ဆိုင်းဘာဘာအကြောင်း
ဟိမ၀္တာချီးမွမ်းခန်းဖွင့် ထားသည်များနှင့် ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဟုထင်ပါသည်...ထိုစာသားများပါသည့် စာရွက်
ထိုနေ့ သင်ခန်းစာတွင် ဆရာက သူ့ ဘ၀တွင်ထိုဆိုင်းဘာဘာကိုတိုင်တည်ရုံဖြင့် မည်သို့ အဆင်ပြေခဲ့ ရသည်
မိမိကံကောင်းသည်က ထိုစဉ်အချိန်တွင်တော့ ထေရ၀ါဒလမ်းကြောင်းအမှန်သို့ ရောက်ရှိနေခဲ့ ပြီးဖြစ်နေခြင်း
ပင်...( ဘိုးတော်၊မယ်တော်၊ နတ် စသည်တို့ မကိုးကွယ်၊ မယုံကြည်တော့ ...)
သို့ နှင့် ဆရာ့ စာရွက်လေးသည်လည်း သင်တန်းစာအုပ်ကြားတွင်မေ့ မေ့ ပျောက်ပျောက်...
ကမ္ဘာ့ အတိုးတက်ဆုံး၊ အချမ်းသာဆုံး ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးမှပင် အဆင့် မြင့် အလုပ်အကိုင်များလုပ်ကိုင်ပြီး
အမိမြန်မာပြည်သို့ ပြန်လာခဲ့ သော၊ မြန်မာပြည်၏နိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာများနှင့် ခေတ်ပြိုင်၊ ငယ်ပေါင်းကြီး
ဖော်ဖြစ်သော၊ ကိုယ်တိုင်လည်းစာပေရေးသားထုတ်ဝေသောဆရာ့ ၏အရှိန်သြဇာကြောင့် ဆရာညွှန်းဆိုခဲ့ 
သည့် ဆိုင်းဘာဘာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူပေါင်းမည်ရွေ့ မည်မျှရှိခဲ့ သည်ကိုတော့ မသိနိုင်ခဲ့ ပါ...
နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဆန်းများ၊ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများကိုစွန့် လွှတ်ကာ အမိမြန်မာပြည်သို့ မျိူးချစ်စိတ်အပြည့် 
ဖြင့် ပြန်လာခဲ့ သောဆရာကား ကိုးကွယ်ရာတွင်တော့ မျိူးမချစ်နိုင်တော့ ပဲ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဆိုင်းဘာဘာကို
( ဗုဒ္ဓဘုရားသည်လည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံသားပင်ဖြစ်ပါသည်...သို့ သော် ဘုရားစင်စစ်ဧကန်ဖြစ်၍ ကိုယ်တိုင်လည်း
ဆင်းရဲအပေါင်းမှငြိမ်းကာ ၊ လိုက်နာကျင့် ကြံအားထုတ်သူများလည်းငြိမ်းစေခဲ့ ပြီ...ငြိမ်းစေနိုင်ဆဲမို့ ကိုးကွယ်
မိမိသည်ပင် ဘာသာရေးတွင် အခြေခံကောင်းခဲ့ ၍သာ ဆရာ့ အယူမှားသို့ မလိုက်ခဲ့ မိခြင်းဖြစ်သည်...
သို့ သော် ဆရာ့ ကိုကားအလေးအစားမပျက်၊ အကြည်ညိုမပျက်ခဲ့ ပါ...ဆရာနှင့် လည်း လူချင်းမခင်ပါ...
သာမာန်သင်တန်းသားတစ်ဦးအနေနှင့် သာ ဆရာ့ သင်တန်းမှ ထွက်ခွာခဲ့ ပါသည်...
ယခုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှ ထိုဆိုင်းဘာဘာ၏ လှည့် ကွက်များကိုဖော်ထုတ်ပြသခဲ့ သည့် ယူကျုဗီဒီယို
ကလစ်လေးကြည့် မိသဖြင့် ကျေးဇူးရှင်ဆရာအား သတိရမိပါသည်...
ဆရာ့ အားလည်းဤဗီဒီယိုကလစ်လေးကိုကြည့် စေချင်မိပါသည်...သင်တန်းဖွင့် ပြီးစာမသင်တော့ သည့် ဆ
ရာလည်းအသက်ထင်ရှားရှိနေလိမ့် ဦးမည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်...
ဆရာနှင့် အတူ မြန်မာပြည်တစ်လွှားမှ ဘုမသိဘမသိ ဆိုင်းဘာဘာယုံကြည်ကိုးကွယ်နေသူအပေါင်း အောက်ပါဗီဒီယိုကလစ်လေးကြည့် ၍ အမြင်မှန်ရပါစေသော်....
ဗီဒီယိုကလစ်ထဲတွင်တော့ဆိုင်းဘာဘာဟု ဆိုထားခဲ့ ပါသည်....
ဓါတ်ပုံတွေထဲတွင်တွေ့ ဖူးသည့် ဆိုင်းဘာဘာဖြစ်မည်ဟုလည်းထင်မိပါသည်...
ဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးကတော့ အဆိုပါကဲ့ သို့ အတုအယောင်ဘိုးတော်တွေအကြောင်းကိုဖော်ထုတ်
ဖွင့် ချထားတဲ့ ဗီဒီယိုကလေးပါ...
လူတိုင်းကြည့် သင့် တဲ့ ပညာပေးအစီအစဉ်လေးပါ...
Posted by Unknown | at 7:47 AM | 1 comments
Gay priests filmed having casual sex
နင်နဲ့ ငါနဲ့ ချစ်တာ ...အမှတ်တရပါ...
လာလာလေ နွှဲလိုက်စို့ တူပျော်ပျော် ...
A priest approachingagay inacasual sex romp
အီတလီနိုင်ငံရောမမြို့ တွင် ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးသုံးဦးတို့ အား လိင်တူချင်းဆက်ဆံသူ ( အရပ်အ
ခေါ်တော့ အခြောက် ပေါ့ လေ ) များကျင်းပသည့် ပါတီပွဲတစ်ခုသို့ တက်ရောက်ပြီး ထိုသူများနှင့် လိင်
ဆက်ဆံခဲ့ ကြသည်ကို မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုများ ရိုက်ကူးခဲ့ သည်ဟုဆိုပါသည်...
ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ဦးဆိုလျှင် ထိုလိင်တူဆက်ဆံသူတစ်ဦးနှင့် ပျော်ပါးဆက်ဆံရာတွင် ဘုရားကျောင်းများ
အဆိုပါဘုန်းတော်ကြီးများ၏ လိင်တူဆက်ဆံသူများနှင့် ပျော်ပါးနေမှုများကို အီတလီနိုင်ငံလက်ရှိဝန်ကြီး
ချူပ်၊ သတင်းမီဒီယာစာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းများပိုင်ရှင် ( အေစီမီလန် ဘောလုံးကလပ်ပိုင်ရှင်းလည်းဖြစ်ပါ
သည်...) သူဌေးကြီး ဆီလ်ဗီယိုဘာလုစကိုနီ ပိုင်ဆိုင်သည့် မြင်ကွင်းစုံရှုခင်းပဒေသာမဂ္ဂဇင်းကြီးမှ သတင်း
သမားတစ်ဦးက ထိုပါတီပွဲသို့ ( အခြောက် ) အယောင်ဆောင်ဝင်ရောက်ကာ လျှိူ့ ဝှက်ကင်မရာဖြင့် ရိုက်
လွန်ခဲ့ သည့် သော အဆိုပါမဂ္ဂဇင်းကြီး၏ရှေ့ ဆုံးစာမျက်နှာတွင် " အမှောင်ဖုံးသည့် အခြောက်ဘုန်းတို့ 
၏ ညများ " ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးသားထားပါသည်...
သတင်းထောက်က အဆိုပါဆောင်းပါးတွင် ၎င်းအားလိင်တူချင်းဆက်ဆံသည့် အသိုင်းအ၀ိုင်းသို့ မိတ်ဆွေ
ဖြစ်သူအခြောက်တစ်ယောက်က မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ ကြောင်း၊ ထိုသူကပင်ပြင်သစ်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ဦးက
ဧည့် ခံကျင်းပသည့် အဆိုပါအခြောက်များ ပျော်မြူးသည့် ပါတီပွဲသို့ တက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားခဲ့ သည်ဟု
ထိုသတင်းဆောင်းပါးတွင် အီတလီခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးနှစ်ဦးနှင့် ပြင်သစ်ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး
တစ်ဦးတို့ ထို လိင်တူဆက်ဆံသူများ၏ပါတီပွဲတွင် မည်သို့ ပါဝင်ဆင်နွှဲပြီး တွေ့ သည့် အခြောက်များနှင့် 
အဆင်ပြေသလို လိင်ဆက်ဆံခဲ့ ကြသည် ကိုအသေးစိတ်ရေးသားဖော်ပြခဲ့ ပါသည်...
မကောင်းမှုတွေမပြုကြနဲ့ ကွဲ့ ....
သင်တို့ ကိုပြောတာ ...ဆရာဘုန်းကတော့ မနေ့ ညကအားပေးခဲ့ ပြီ...
The priest, who approachedagay for sex, prepares to read Mass
ထိုပါတီပွဲအတွင်း ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ဦးက အခြောက်နှစ်ဦးနှင့် မဖွယ်မရာပုံစံများဖြင့် ကခုန်ခဲ့ ပြီးနောက်
ဘုရားကျောင်းတွင်ဆုတောင်းဝတ်ပြု၊ တရားဟောရာများ၌၀တ်ဆင်ရသည့် ဝတ်ရုံကို ၀တ်ဆင်ပြီး လိင်
တူဆက်ဆံသူတစ်ဦးနှင့် လိင်ဆက်ဆံကာပျော်ပါးခဲ့ သည်ဟုဆိုပါသည်...
ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ဦးကတော့ အခြောက်နှစ်ယောက်နှင့် မီးကုန်ယမ်းကုန်၊ အစွမ်းကုန်ပျော်ပါးခဲ့ ပြီးနောက်
တစ်နေ့ တွင် ဘုရားကျောင်း၌ ခပ်တည်တည်ပင် လူအများအားတရားဟောကာ၊၀တ်ပြုဆုတောင်းခဲ့ ပါသေး
အခြားဘုန်းတော်ကြီးတစ်ဦးကမူ ၎င်းနှင့် သိသမျှသောဘုန်းတော်ကြီးများ အားလုံးနီးပါး ( ၉၈ ရာခိုင်နှုံး )
ဟာ လိင်တူဆက်ဆံသူ ( များ တို့ ကိုကြင်နာသနားအားပေးသူ ) တွေဖြစ်ကြတယ်လို့ အခိုင်အမာပြော
ထိုသတင်းကြောင့် ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးများကို လိင်ဆက်ဆံခြင်းကာမဂုဏ်အာရုံခံစားခြင်းမှတား
မြစ်ထားပြီး လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုလည်း အကုသိုလ်အပြစ်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကက်သလစ်
သာသနာတော်ကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစေခဲ့ ပါတယ်...
အီတလီနိုင်ငံ၊ကက်သလစ်သာသာနာပြုကျောင်းတော်ကတော့ ထိုဘုန်းတော်ကြီးများကို လူဝတ်လဲဖို့ 
( ဘုန်းတော်ကြီးဘ၀ ကိုစွန့် လွှတ်ဖို့) တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ ပါသည်...
ရောမမြို့ ဂုဏ်းအုပ်ဘုန်းတော်ကြီးများကတော့ ထိုကဲ့ သို့ ( နှစ်ဘ၀စံ ) နေကြသည့် ဘုန်းတော်ကြီးများ
ကို ပြစ်တင်ရှုံ့ ချလိုက်ပြီး ထိုသူများကို ဘုန်းတော်ကြီးများအဖြစ် မသွတ်သွင်း၊ မချီးမြှင့် ခဲ့ သင့် ကြောင်း၊
ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ဦးအဖြစ် မထိုက်တန်သည့် ၊ ဂုဏ်သရေကင်းမဲ့ သည့် လုပ်ရပ်များအား ပြုမူနေသူများ
ကို ကျောင်းတော်အနေဖြင့် အထူးလေ့ လာစုံစမ်းဖော်ထုတ်သွားမည်ဟု ကတိပေးပြောကြားသွားပါသည်...
အမေရိကန်နိုင်ငံ ကက်သလစ်သာသနာ မဂ္ဂဇင်းရဲ့ အုပ်ချူပ်မှုအယ်ဒီတာဖြစ်သူ ဘရိုင်ယန်ကုန်းစ် က
တော့ တစ်ခြားသူများနှင့် လိင်မှုဆက်ဆံပျော်ပါးနေလေ့ ရှိကြတဲ့ သာမာန်ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် အ
ခြောက်ဘုန်းတော်ကြီးများ အမြောက်အများရှိနေပါတယ် လို့ ဆိုခဲ့ ပါသည်...
အီတလီကတော့အဆိုးဆုံးဖြစ်ပါလိမ့် မယ်...၉၈ ရာခိုင်နှုံးဆိုတော့ ...
အဆိုပါသတင်းထောက်တောင် ထိုဘုန်းကြီးတွေလက်ချက်ကနေ လွတ်ခဲ့ ရဲ့ လားမသိတော့ပါဘူး...
Three priests have been filmed attendingagay joint and having casual sex in Rome, Italy.
One of the priests even put his cassock back on to have sex withagay.
A journalist from Panorama magazine – which is owned by Italian Prime Minister and media baron Silvio Berlusconi – had gone undercover and filmed the priests' acts using hidden cameras.
The magazine has frontpaged the article, headlined Gay Priests’ Nights on the Town, in its latest edition that hit the streets on Friday.
In the report, the journalist wrote that he was introduced to the gay community byagay accomplice, who also invited him to attendaparty - hosted byaFrench priest.
It detailed on how the three priests - two Italians andaFrenchman - took part in gay events and had casual sex.
During the party,apriest was seen "dirty dancing" with two gays and was then seen putting on his cassock to have sex withagay.
In one occasion, this priest hadawild night with two gays and the next morning, he was performing mass.
Another priest claimed that 98% of the priests he knows are homosexual.
The news has rocked the Catholic Church, which forbids priests to have sex and homosexuality is also seen asasin.
The Catholic Church in Italy has urged the priests to leave the priesthood.
The Diocese of Rome denounced those priests who were leadinga"double life" and said they should not have been ordained and promised that the church would rigorously pursue anyone who is behaving inaway that is not dignified forapriest.
Bryan Cones, managing editor of the liberal U.S. Catholic Magazine, claimed that there are plenty of priests — straight and gay — who misbehave sexually with other adults.
Posted by Unknown | at 1:42 AM |3comments
Headmaster poses nude for art class
Model turned headmaster....
တရုတ်နိုင်ငံ၊ အနုပညာသင်ကျင်းတစ်ခုမှ ပန်းချီအနုပညာသင်တန်းတစ်ခုတွင် မော်ဒယ်အဖြစ်သရုပ်
ဆောင်ပြပေးမည့် သူရောက်မလာနိုင်သဖြင့် ထိုကျောင်း၏ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက သင်တန်းသားများ
အတွက် အ၀တ်ဗလာဖြင့်မော်ဒယ်သရုပ်ပြပေးခဲ့ သည်ဟုဆိုပါသည်...
ထိုအဖြစ်အပျက်ကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံ၊ နန်ကျင်းမြို့ ရှိ၊ ကျူံရှန် ၀ိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံကျောင်းတွင် ရုတ်ရုတ်သဲသဲ၊
တနင်္လာနေ့ တစ်ရက်မှာ အသက် ၄၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ယန်းလင်ချွမ်းဟာ အဆိုပါသင်
တန်းစာသင်းခန်းထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ ပြီး ထိုနေ့ အဖို့ သင်တန်းသားများအတွက်သရုပ်ပြထိုင်ပေးမည့် 
မော်ဒယ်အမျိူးသား မလာရောက်နိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ကျောင်းသားကျောင်းသူများက စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်သွားပြီး ငြီးတွားပြောဆိုနေစဉ်မှာပဲ ဆရားကြီးက
သင်တန်းသားများထဲမှ တစ်ဦးဦးအနေနဲ့ မော်ဒယ်နေရာမှာအစားထိုးပေးနိုင်မလားလို့ မေးမြန်းခဲ့ ပါတယ်...
ကျောင်းသားတွေထဲက မည်သူမျှ မကူညီချင်ခဲ့ ကြပါဘူး...ထိုအခါ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးယန်း က၎င်းရဲ့ 
အ၀တ်အစားတွေချွတ်ပြီး မိန်းကလေးရှစ်ဦးအပါအ၀င်ကျောင်းသားအယောက် ၂၀ ကိုစေတအပြည့် နဲ့ 
ကိုယ်လုံးတီးမော်ဒယ်ပြခဲ့ ပါတော့ တယ်...
ဆရာကြီးယန်း ဟာနာမည်ကျော်ဂီတနဲ့ ပန်းချီအနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်... သူ့ ရဲ့ ဆီဆေးပန်းချီကား
များဟာ ရှန်ဟိုင်းကုန်စည် ၂၀၁၀ ပြပွဲရဲ့ ကုလသမဂ္ဂပြခန်းမှာပြသထားတဲ့ ဂန္တ၀င် မြောက်လက်ရာတွေ
ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးယန်းရဲ့ အ၀တ်ဗလာမော်ဒယ်ကိုယ်ဟန်ပြပေးနေတဲ့ ပုံနှင့် သတင်းကို ကျောင်းသား တစ်ဦးက အင်တာနက်ပေါ်မှာလွန်ခဲ့ တဲ့ ကြာသပတေးနေ့ က တင်ခဲ့ ပါတယ်...
ထိုသတင်းတင်ပြီး နာရီပိုင်းအတွင်းမှာပဲ လာရောက်ဖတ်ရှုဝေဖန်သူပေါင်း ၅၅၀၀ အထိရှိခဲ့ ပါတယ်... တစ်ချိူ့ လာရောက်ကြည့် ရှုသူတွေကတော့ ယန်းရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အားကစားသမားတစ်ယောက်လိုပဲ တောင့် တင်းသန်မာပါတယ်ဆိုပြီး ချီးကျူးသွားကြလေရဲ့ ... ဒါကမှ ( ဆရာ့ ရဲ့) တစ်ကယ့် အနုပညာပါ
ပဲ လို့ လည်းတစ်ဦးက မှတ်ချက်ပြုသွားပါတယ်...
ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက ဘေးမှာလာရပ်နေတော့ ကျွန်တော့် ဖြင့် ရှက်လို့ မျက်နှာကိုနီ သွားခဲ့ တာပါပဲလို့ လည်းနောက်ကျောင်းသားတစ်ဦးက ဆိုခဲ့ ပါသေးတယ်...
ဟီနန်သတင်းစာနှင့် တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခဲ့ ၇ာမှတော့ ဆရာကြီးက သူ့ အနေနဲ့ ထိုနေ့ က (အနုပညာ ) သင်ခန်း စာကိုဖျက်လိုက်ယင် ကျောင်းသားတွေရဲ့ ငွေနဲ့ အချိန်ဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ 
" ဘယ်သူမှ မကူညီကြလို့ ကျွန်တော်ကပဲစေတနာနဲ့ ကူညီလိုက်ရတော့ တာပါပဲ...ဒါဟာကျွန်တော့် ဘ၀
အတွက်ပထမဦးဆုံး ကိုယ်လုံးတီးနဲ မော်ဒယ်နေပြခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်..." လို့ သူကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
အခုလိုလုပ်ရတာဟာဘာမှရှက်စရာမလိုကြောင်း လိုအပ်လာပါက ၎င်းအနေနှင့် နောက်ထပ်ပြုလုပ်ဦး
မှာဖြစ်ကြောင်းလည်း သူကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
အနုပညာမျက်စေ့ နဲ့ ကြည့် ရမယ် ပေါ့ ...
A headmaster posed nude for his students when the model failed to turn up at an art class in China. The incident has createdastir at Zhongshan School of Arts and Science in Nanjing. On Monday, headmaster Yang Linchuan, 43, walked intoaclassroom and told the students that their male nude model could not turn up for the session. And just as the students were talking and expressing of their disappointment, the headmaster asked if anyone in the class could take up the model's place. None of the students volunteered. Yang then took off his clothes and posed for the 20-odd students, including about eight females. Yang isafamous musician and artist. His oil painting is among the masterpieces being displayed at the United Nations pavilion in Shanghai Expo 2010.
A student posted the news and Yang's nude photographs on the Internet on Thursday. Just within four hours, the article attracted more than 5,500 visitors. Some netizens have praised Yang's body, saying that it was as fit as an athlete's. "It's an art," commented one viewer.
"He looksabit nervous and shy but appears to have adapted to it," saidastudent. "When he (the nude headmaster) stood next to me, my face turned red," another student wrote.
In an interview with Henan Shangbao, Yang said the students' money and time would have been wasted if he cancelled the class. "I had to do it since no one volunteered," he said, adding it was the first time that he had posed asanude model. Yang said it was nothing to be ashamed of, adding that he would do it again if necessary. Source: Henan Shangbao
Posted by Unknown | at 12:25 AM |3comments
Labels: news: Henan Shangbao
ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့ ....အဖြေမှန်ကတော့ ....
အဲဒီစာလုံးတွေဟာ သင်တွေးခဲ့ တာတွေနဲ့ အတူတူမဟုတ်ခဲ့ ဘူးဆိုယင်.....
သင့် ရဲ့ စိတ်ကိုပြုပြင်ဖို့ လိုနေပါပြီ....
Posted by Unknown | at 12:59 AM |4comments
Labels: humour : internet
Love the idea. Nowagirl can haveaheart tan on her ass thanks to this special bikini. Looks very cute.
တက်တူးခေါ်ဆေးမှင်ကြောင်ထိုးစရာမလိုပဲ နေရာအနှံ့ ချစ်သူကို အသဲပုံလေးတွေ ချစ်နမိတ်လက်ဆောင်
အဖြစ်ပေးချင်တဲ့ သူများအတွက် စိတ်ကူးကောင်းနဲ့ တီထွင်လိုက်တဲ့ ရေကူးဘောင်းဘီလေးပါပဲ...
ဒီစိတ်ကူးကို အခြေခံပြီး တစ်ခြားအင်္ကျီ၊ နှင့် အ၀တ်အစားတွေကိုလည်း အသဲပုံအကွက်လေးတွေ ထွင်ပြီး
ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်မှာ စိတ်ကူးအကြံကောင်းတစ်ချက်ဟာ တစ်သက်စားမကုန်နိုင်လောက်အောင်
တစ်ချီတည်းနဲ့ ပွပေါက်တိုးတတ်ပါတယ်... ( လူ့ အခွင့် အရေးကို တရားဥပဒေနဲ့ အကာအကွယ်ပေးထား
တဲ့ တိုင်းပြည်များမှာပေါ့ ...)
Posted by Unknown | at 9:44 PM | 1 comments
Labels: photo : fun
2010 South Africa World Cup, “Made In China
တရုတ်တွေအနိုင်ရသွားတဲ့ ကမ္ဘာ့ ဖလားပြိုင်ပွဲကြီး....
ကမ္ဘာ့ ဖလားဘောလုံးပွဲကြီးပြီးခဲ့ လေပြီ...
အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ ၍အိမ်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်သောတောင်အာဖရိကနိုင်ငံသည်လည်း အများ၏ချီးမွမ်း
ခြင်းခံရပြီး ဂုဏ်တက်ကာ လာရောက်ကြည့် ရှုအားပေးသူများကိုအမှီပြုပြီး စီးပွားရေးအရလည်း အ
စပိန်နိုင်ငံသည်လည်းနောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲတွင် တစ်လုံးတည်းသောဂိုးဖြင့် အနိုင်ရကာ ပထမဦးဆုံး
ကမ္ဘာဖလားကို ဆွတ်ခူးသွားနိုင်ခဲ့ သည်မို့ ပျော်တစ်ပြုံးပြုံး မော်မဆုံးချေ...
သို့ သော် ထိုနိုင်ငံများထက် ကမ္ဘာ့ ဖလားကိုအမှီပြုပြီး အကျိူးအမြတ်အများဆုံးဖြစ်သွားခဲ့ သူကတော့ 
ကျွန်တော်တို့ ရွှေပြည်ကြီးက ဘဘများ အားကိုးကြသည့် ဆရာကြီး တရုတ်နိုင်ငံပင်ဖြစ်ပေတော့ သည်...
ထိုသို့ အသေအချာပြောနိုင်ရသည့် အကြောင်းအရင်းများကတော့ ....
တောင်အာဖရိက ကမ္ဘာ့ ဖလားတရုတ်ပြည်ကပြုလုပ်ပေးသည်...
သမီးတို့ ကချူပ်...အစ်ကိုတို့ က ကန်....
တောင်အာဖရိကတွင်ကျင်းပခဲ့ သည့် ကမ္ဘာ့ ဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွင်ကန်ခဲ့ ကြသောဘောလုံး၊
ကမ္ဘာဖလားပွဲ၏အထိမ်းအမှတ် အရုပ်၊ ကမ္ဘာဖလားပွဲအတွက် ကွန်ဒွန် ၊ အားလုံးအားလုံး တရုတ်
ပြည်မှပင် ထုတ်လုပ်တင်ပို့ ရောင်းချခဲ့ ရလေသည်...
ဤနည်းများဖြင့် တရုတ်တို့ ကမ္ဘာ့ ဖလားဘောလုံးပွဲကို ဖိုင်နယ်ရောက်သည်အထိ ပါဝင်ခဲ့ ကြသည်
The “Jabulani” South Africa World Cup ball ....
တရုတ်ပြည်တွင် ကျာဘူလားနီ ဟုအမည်ရသည့် တောင်အာဖရိက၊ ကမ္ဘာ့ ဖလားဘောလုံးပွဲတွင်
တရားဝင်အသုံးပြုမည့် ဘောလုံးများကို တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကျန်းစီ ပြည်နယ်၊ ကျူကျန်းမြို့ ရှိ Jianxi
Jiujian Si Mao Bo ကုမ္ပဏီမှ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလကပင် အဓိကထုတ်လုပ်တင်သွင်းခွင့် ရရှိခဲ့ ပါ
ထိုကုမ္ပဏီဘောလုံးစက်ရုံမှ တစ်လလျှင် လုပ်ခ ၂၀၀၀ ရင်မင်ဘီ ( တရုတ်ငွေကြေး ) ရကြသော
၀န်ထမ်းပေါင်း ၇၀၀၀ မှ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများမစခင် ယခုနှစ်မေလ အထိဘောလုံးပေါင်း ၁၂ သန်း
ကမ္ဘာ့ ဖလားမှာ နာမည်ကျော်ခဲ့ တဲ့ ဗူဗူဇီလာ ခေါ် ဟွန်းတစ်မျိူးကိုလည်း တရုတ်နိုင်ငံ၊ ကျီကျန်း
ပြည်နယ်၊ နင်ဟိုင် အရပ်ဒေသက ပလတ်စတစ်စက်ရုံတွေကနေ အဓိက ပြုလုပ်တင်ပို့ ရောင်းချခဲ့ 
ဒင်းနှိပ်စက်လို့ နားပျက်ခဲ့ ရ....
အာဖရိကရှိ ဗူဗူဇီလာ များရဲ့၉၀ ရာခိုင်နှုံးဟာ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရီဝူး အသေးစား ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း
ဈေးကွက် ဒေသကနေတင်ပို့ ရောင်းချခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ထိုစက်ရုံအလုပ်သမားများဟာလည်း လခ တရုတ်ငွေ ၂၀၀၀ ယွမ်မျှသာရတာဖြစ်ပါတယ်...
သူတို့ အနေနဲ့ ဟွန်းတစ်ခုကို လုပ်ခ အမေရိကန်ငွေ တစ်ပြားမျှလောက်သာရကြတာဖြစ်ပါတယ်...
အရှည် ၆၀ စင်တီမီတာရှိတဲ့ ဗူဗူဇီလာ တစ်ချောင်းရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစားရိတ်က ၂ ယွမ် ခန့် 
မျှသာရှိပေမယ့် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံကိုရောက်ရှိချိန်မှာတော့ လက်လီဈေးနဲ့ တစ်ချောင်း ၅၄ယွမ်
အထိ ရောင်းချနိုင်ခဲ့ ပါတယ်လို့ အဆိုပါ ဟွန်းကလေးတွေထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံပိုင်ရှင် ၀ူယီကျွန်း က
သင့် ဘ၀ အတွက် "သင့် အကြိုက် " ကိုရွေးချယ်ပါ...
လွန်ခဲ့ တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ကတည်းကစပြီး တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၊ ကျန်းမာရေးဌာနဟာ တရုတ်နိုင်ငံ၊
Guangxi Guilin ရော်ဘာစက်ရုံမှ " သင့် အကြိုက် " ကွန်ဒွန်များကို ကမ္ဘာ့ ဖလားပွဲတော်အတွက်
တရားဝင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ အတွက် မှာကြားခဲ့ ပါတယ်...
ကမ္ဘာ့ ဖလားပွဲမစခင်အချိန်လေးအထိကို တရုတ်နိုင်ငံလုပ် ကွန်ဒွန်ပေါင်း သန်း ၁၀၀ ကျော် တောင်
အာဖရိကနိင်ငံကို တင်ပို့ ခဲ့ ပြီးဖြစ်တယ်လို့ ဘေဂျင်းအခြေစိုက် Legal Evening News ကဖော်ပြ
ဒါလေးလည်း ပေါက်ဖော်တို့ ဆီကပါပဲ...
တောင်အာဖရိက၊ ကမ္ဘာ့ ဖလားပွဲရဲ့ တရားဝင်အထိမ်းအမှတ်အရုပ် ဇာကူမီ ဟာလည်း တရုတ်
ပြည်မှာပဲ ထုတ်လုပ်တင်ပို့ ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
အဆိုပါအရုပ်ထုတ်လုပ်ဖို့ အတွက် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဂွမ်တုန်ပြည်နယ်၊ ကျန်စုဒေသမှာ စက်ရုံပေါင်း
ရာနဲ့ ချီပြီးရှိနေပါတယ်လို့ သတင်းများအရ ဆိုပါတယ်...တစ်ခြားဒေသများကလည်းထုတ်လုပ်ခဲ့ 
စလိုဗေးနီးယား အသင်းကစားသမား ဒူရီကာ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၊ ပရီတိုးရီးယားတွင်
Slovenia team member Durica buyingaZakumi atastore in Pretoria, South Africa
မတော်တာကိုကြည့် မနေနဲ့ ဦး...
ကမ္ဘာ့ ဖလားဘောလုံးပွဲမှာ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေလည်း ၎င်းတို့ ရဲ့ ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်တွေကို
ထည့် သွင်းကြေငြာခဲ့ ပါတယ်...
ယင်းလီ ကုမ္ပဏီရဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ကြေငြာဟာ ကမ္ဘာ့ နာမည်ကျော် ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ ပက်ပစီ၊
အဒီးဒတ်စ်၊ နဲ့ နိုက် တို့ ရဲ့ ကြေငြာတွေနဲ့ အတူယှဉ်တွဲပြီး ဘောလုံးကွင်းစည်းဘေးမှာ ကြေငြာခဲ့ 
လို့ လူအများရဲ့ စိတ်ပါဝင်စားမှုကိုရခဲ့ ပါတယ်....
နိုင်ငံခြားသားဘောလုံးပရိတ်သတ်များသာမက တရုတ်နိုင်ငံသားဘောလုံးပရိတ်သတ်များပင် အ
ဆိုပါကုမ္ပဏီကိုစိတ်ဝင်စားလွန်းလို့ ဘယ်လိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချလည်းဆိုတာ စုံစမ်းလာစေ
တဲ့ အထိဖြစ်စေခဲ့ ပါတယ်...
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟီဘေပြည်နယ်၊ ဘောင်ဒင်း အရပ်က စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ ယင်းလီ ဟာကမ္ဘာ့ ဘော
လုံးပရိတ်သတ်အတွက်တော့ ခပ်စိမ်းစိမ်းဖြစ်နေပေမယ့် ပြိုင်ပွဲစပြီးရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ အင်
တာနက်ရှာဖွေရေး စာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ ဂူဂယ်လ်နဲ့ ဘိုင်ဒူး ( တရုတ်အင်တာနက်စာမျက်နှာ ) တွေ
မှာ အများဆုံးရိုက်ထည့် ပြီးရှာကြည့် တဲ့စာလုံးဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ်လို့ကမ္ဘာ့ ဖလားပွဲကို အဓိကပံ့ ပိုး
သူတွေထဲက တစ်ဦးရဲ့ အဆိုအရ သိရပါတယ်...
ဒါကြောင့် မို့ ကြေငြာအားကိုလည်းလျော့ တွက်လို့ မရတော့ ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်သင့် ပါတယ်...
နောက်တစ်ခုက ကမ္ဘာ့ ဖလားကိုအမှီပြုပြီး ဘောလုံးပွဲအမှတ်တစ်ရ ပစ္စည်းလေးတွေကို တရုတ်
ပြည်ကပဲ ထုတ်လုပ်ပြီးတင်ပို့ ရောင်းချခဲ့ တာ ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံးအမှတ်တစ်ရပစ္စည်းဈေးကွက်ကြီး
ကမ္ဘာ့ ဖလားဘောလုံးပွဲကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံ ကျီကျန်းပြည်နယ်၊ ယီဝူးဒေသ အသေးစားအမှတ်
တစ်ရပစ္စည်းလေးများထုတ်လုပ်တဲ့ ဈေးကွက်အနေနဲ့ လစဉ်ပြည်ပပို့ ကုန်တန်ဖိုးဟာ လွန်ခဲ့ တဲ့ 
ခြောက်လအတွင်း ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းကျော်တဲ့ အထိမြင့် တက်သွားပြီး လွန်ခဲ့ တဲ့ ငါးလအတွင်း
တင်ပို့ မှုဟာ မနှစ်ကထိုအချိန်ကာလတွေထက် ၁၁၀ ရာခိုင်နှုံးမြင့် တက်ခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်....
ပုဝါတစ်ကမ်း...လက်တစ်ကမ်း မို့ ...
ကမ္ဘာ့ ဖလားပွဲစဉ်တွေအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်းတွေဟာ မရှိမဖြစ်အရောင်းရဆုံးတွေ
ပွဲကြည့် ပရိတ်သတ်တွေဆောင်းခဲ့ ကြတဲ့ အရောင်မျိူးစုံတဲ့ ဆံပင်အတုအုပ်ဆောင်းတွေကို ကျီ
ကျင်းပြည်နယ်၊ ယီဝူးမြို့ က တီယန်ချန်း လက်မှုအနုပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုကထုတ်လုပ်ခဲ့ တာဖြစ်
ပြီး စာတန်းမျိူးစုံပါတဲ့ လည်ပတ်ပုဝါတွေကိုတော့ ကျီကျင်းပြည်နယ်၊ ဟန်ကျိူးမြိ့ က မိုရှန်ဟွား
ကုမ္ပဏီက အထည်ပေါင်း ၆ သိန်းမျှထုတ်လုပ်တင်ပို့ ရောင်းချခဲ့ ပါတယ်...
တစ်ထည်ကို ၁၀ ယွမ် ကနေ ယွမ် ၂၀ အထိဈေးရခဲ့ လို့ အဆိုပါကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ယွမ်ငွေ ၆ သန်း
မှ ၇ သန်းအထိ ၀င်ငွေရှိခဲ့ ပါတယ်...
ဒီဆံပင်တုတွေလည်း သူတို့ လုပ်တာပဲ...
ကျီကျင်းပြည်နယ်က ကုမ္ပဏီတစ်ခုကပဲ ကမ္ဘာ့ ဖလားပွဲ ကစားကွင်းအတွက် ထိုင်ခုံပေါင်း
၅ သောင်းတင်ပို့ ခဲ့ ရပါသေးတယ်...
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၊ နယ်လဆင်မင်ဒဲလားဘေး မြို့ တော်ဝန် တရုတ်နိုင်ငံ၊ နင်းဘို မြို့ ကိုလာ
ရောက်လည်ပါတ်ခဲ့ စဉ်တုံးက ကိုယ်တိုင်ပဲ အဆိုပါထိုင်ခုံတွေကိုမှာကြားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်လို့ 
အဆိုပါ ကုမ္ပဏီရဲ့ အတွင်းလူတစ်ဦးရဲ့ အဆိုအရသိရပါတယ်...
အာဂျင်တီးနား အသင်းသားများနဲ့ ကမ္ဘာ့ ဇတ်ခုံပေါ်က တရုတ်ကလေးများ...
တရုတ်တို့ ရဲ့ အမြင်ကျယ်မှုက ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်မကပါဘူး....
အာဂျင်တီးနားနဲ့ မက္ကစီကိုတို့ ကန်တဲ့ ပွဲစဉ်မှာလည်း တရုတ်ကလေးငယ်တွေဟာ အားကစား
သမားများနဲ့ အတူ ကွင်းထဲမှာ ပွဲမစခင် ပါဝင်သရုပ်ပြခဲ့ ကြပါသေးတယ်...
တရုတ်နိုင်ငံမှ အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် အိုင်တီနည်းပညာကုမ္ပဏီများဟာလည်း တောင်အာ
ဖရိက အားကစာကွင်းတွေမှာ ထိုးဖောက်တင်ပို့ ခဲ့ ကြပါသေးတယ်...
တောင်အာဖရိကရဲ့ ကမ္ဘာ့ ဖလားဘောလုံးကွင်းရဲ့ အဓိကလေအေးပေးစနစ်သုံးပစ္စည်းများနဲ့ ထိန်း
ချူပ်စနစ်တွေ ကိုတင်သွင်းခွင့် ရခဲ့ လို့ ၎င်းတို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ရောင်းအားဟာ ယွမ် သန်း၂၀၀ အထိ
တိုးတက်ခဲ့ ပါတယ်လို့ဂရီးလျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီရဲ့ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ဒါကြောင့် မို့ အခုပြီးသွားတဲ့ ကမ္ဘာ့ ဖလားဘောလုံးပွဲမှာ အမှန်တစ်ကယ် အများဆုံးအနိုင်ရသွား
တာကတော့ တရုတ်ပြည်မို့တရုတ်ဖလားပွဲလို့ ဆိုယင် လွန်မယ်မထင်ပါဘူး....
နောက်ဆိုယင် ကလေးတွေပါ တရုတ်ပြည်တွင်ထုတ်လုပ်သည်ဆိုပြီး ကမ္ဘာကိုတင်ပို့ ဦးမလားမသိပါဘူး...
ကျွန်တော်တို့ လည်း တရားအားထုတ်လို့တရုတ်အားထားကြပါစို့ ...
It’s Chinese name is “普天同庆” ["Jabulani"], and it is the official ball of the South Africa World Cup. The above everyone is familiar with, but what everyone is not familiar with is: It is made by Chinese workers with 2000 RMB monthly wages — Jiangxi Jiujiang Si Mao Bo Company was authorized in May 2009 as the main production base for the 2010 South Africa World Cup football, and began manufacturing the South Africa World Cup official ball. Up until May this year, this factory’s over 7000 workers have already completed 12 million competition and commercial official balls.
Beginning from February, the South Africa Health Department began ordering “Choice Condoms” fromaGuangxi Guilin latex factory to be an official World Cup product.
Just before the kickoff of World Cup 2010, more than 100 million China-made condoms were exported to South Africa, Beijing-based Legal Evening News reported.
“The ‘Ying Li’ on the advertising boards, what do they do?” Accustomed to seeing Pepsi, Adidas, and Nike’s advertisements, Ying Li appearance aroused much curiosity, not just from foreign football fans but even Chinese football fans can’t resist “Baidu-ing” it, to find out what it is.
As one of the sponsors for this World Cup, the new energy company Ying Li from Baoding, Hebei province is indeeda“stranger” in the eyes of football fans, but just from the first few days of the World Cup, they have become famous, becoming one of the most searched keywords on Baidu and Google during these few days.
One company in Zhejiang province provided 50,000 seats for the World Cup. According toacompany insider, this order was personally ordered by the South African Nelson Mandela Bay mayor while leadingadelegation visiting Ningbo.June 27, before the South Africa World Cup Round of 16 Argentina versus Mexico match, several Chinese children appeared on the pitch.
Posted by Unknown | at 12:34 AM |3comments
Filipina maid inherits millions from employer
ဖိလစ်ပိုင်အိမ်ဖော်တစ်ဦး အလုပ်ရှင်ထံမှ ဒေါ်လာသန်းနှင့်ချီပြီးအမွေရ...
စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင်အနှစ် ၂၀ ကျော်ကြာမျှအလုပ်လုပ်နေသောဖိလစ်ပိုင်အိမ်ဖော်အမျိူးသမီးသစ်ဦးဟာ
သူမရဲ့ အလုပ်ရှင် ( အိမ်ရှင် ) ကွယ်လွန်သွားပြီးနောက် ဒေါ်လာလေးသန်းကျော်ခန့် အမွေဆက်ခံခွင့် 
ရရှိခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
" အခုတော့ ကျွန်မဟာစင်္ကာပူမှာရှိတဲ့ အိမ်ဖော်မတွေထဲမှာ ကံအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ ရပါပြီ "လို့ အသက်
၄၇ နှစ်ရှိ တစ်ကိုယ်ရေတစ်ကာယသမားဖြစ်သူ ခရစ်စတင်းဟုနာမည်ဝှက်ဝှက်နှင့် သာသိရသည့် အမျိူး
သမီးက စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ စထရိတ်တိုင်းသတင်းစာနှင့်တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင်ပြောကြားသွားခဲ့ ပါတယ်..
သူမရဲ့ မိခင်နိုင်ငံဖိလစ်ပိုင်မှာ ငွေကြေးချမ်းသာကြွယ်ဝသူများကိုပြန်ပေးဆွဲကာခြိမ်းခြောက်ငွေတောင်း
ပြီးသတ်ဖြတ်လေ့ ရှိတာမို့ သူမရဲ့ အသက်အန္တရယ်အတွက်စိုးရိမ်ရတာမို့ သူမရဲ့ အမည်အရင်းကိုပြော
ဆိုဖို့ တော့ အဆိုပါအိမ်ဖော်အမျိူးသမီးကငြင်းဆန်ခဲ့ ပါတယ်...
သူမယခုလက်ခံရရှိခဲ့ တဲ့ ကံကောင်းမှုတွေထဲမှာ ငွေသားအပြင်၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော် သြချတ်
လမ်းမအနီးမှာရှိတဲ့ အဆင့် မြင့် ဇိမ်ခံတိုက်ခန်းတွေကို သူမရဲ့ အလုပ်ရှင်ဖြစ်သူ ဆရာဝန်၊ လူမှုရေးဆိုင်
ရာအများအကျိူးလှူဒါန်းကူညီလေ့ ရှိသူ မစ္စကွက်ကိုင်မျူး တစ်ယောက် လွန်ခဲ့ တဲ့ နှစ်က အသက် ၆၆ မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးနောက် ရရှိခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
အဆိုပါအိမ်ဖော်အမျိူးသမီးဟာ သူမရဲ့ အိမ်ရှင်ဆရာဝန်မကြီးရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူကြီးကိုလည်း ကွယ်လွန်
သည်အထိပြုစုစောင့် ရှောက်ခဲ့ တာဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ အိမ်ရှင်ဖြစ်သူ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ သေတမ်းစာရေးခဲ့ 
စဉ်ကတည်းက သူမအနေနဲ့ ထိုငွေကြေးဥစ္စာပစ္စည်းများကိုအမွေရမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားအသိပေး
" ကျွန်မတို့ ကြားမှာဘာမျှလျှိူ့ ဝှက်ချက်မရှိတာမို့ သူမက ( သူဌေးမ ) ကျွန်မကို အမွေတွေဘယ်
လောက်ပေးခဲ့ မယ်လို့ ပြောခဲ့ စဉ်တုံးက ကျွန်မအနေနဲ့ ထူးပြီး မအံ့ သြ၊ မတုန်လှုပ်ခဲ့ ပါဘူး..." လို့ 
သူမကသတိတရနဲ့ ပြန်ပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
အလုပ်ရှင်နဲ့ သူမဟာ အမြဲပဲမခွဲအတူတူနေခဲ့ ကြတာမို့ သူမရဲ့ အလုပ်ရှင် မစ္စကွက် လွန်ခဲ့ တဲ့ တစ်နှစ်
ကကွယ်လွန်ခဲ့ တော့ အိမ်ဖော်အမျိူးသမီး ခရစ်စတင်းဟာ စိတ်ထိခိုက်ခံစားခဲ့ ရပါတယ်...
သူမစိတ်သက်သာရာရစေဖို့ ကွယ်လွန်သူအလုပ်ရှင်ဆရာဝန်မကြီးရဲ့ တူဖြစ်သူနဲ့ ခဏတာသွားရောက်
" ဆရာမဒေါက်တာကွက်ခ် နဲ့ ကျွန်မအတူနေခဲ့ တဲ့ အချိန်တွေက ကျွန်မရဲ့ အမေနဲ့ နေခဲ့ တဲ့ အချိန်တွေ
ထက်တောင်ပိုများခဲ့ လို့ သူမဆုံးပါးသွားတော့ ကျွန်မအသဲတွေကွဲကြေသလိုခံစားခဲ့ ရပါတယ်...
သူမအကြောင်းစဉ်းစားမိတိုင်းငိုခဲ့ ရပါတယ်...သူမ မရှိပဲကျွန်မဘ၀ကိုဆက် မနေတတ်လောက်ပဲဖြစ်
သူမဘယ်ကိုသွားသွား ကျွန်မဟာသူမရဲ့ နံဘေးမှာအမြဲပဲရှိနေခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်..." သူမကပြောကြား
ယခုတော့ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ အမြဲနေထိုင်ခွင့် လျှောက်ထားတဲ့ အိမ်ဖော်အမျိူးသမီးကြီးက သူမအနေနဲ့ 
ယခုလိုချမ်းသာလာပေမဲ့ သူမရဲ့ ဘ၀နေထိုင်မှုပုံစံကတော့ မပြောင်းလဲခဲ့ ပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်...
" အခုအမွေရတဲ့ ငွေအကြောင်းတော့ ကျွန်မသိပ်မစဉ်းစားမိပါဘူး ...ကျွန်မဘ၀ကတော့ အယင်အ
တိုင်းမပြောင်းလဲပါဘူး...သူဌေးတစ်ဦးလိုလည်းမနေပါဘူး" လို့ သာမန်ဘလောက်အင်္ကျီလေးနဲ့ 
ဘောင်းဘီအပျော့ စားမျိူး ( အိမ်နေရင်းဝတ်တဲ့ ဘောင်းဘီ ) ၀တ်ထားတဲ့ ဆံပင်တိုတိုနှင့် အမျိူးသမီး
က ပြောပြခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
" ကျွန်မဟာအရင်ကအတိုင်းပဲဘာမှမပြောင်းလဲပါဘူး...အခုငွေရှိလို့ ဆိုပြီးပြောင်းလဲမှာလဲမဟုတ်ပါဘူး...
ကျွန်မရဲ့ သူငယ်ချင်းဖိလစ်ပိုင်အိမ်ဖော်တွေဆိုယင်လည်းကျွန်မကို အယင်အတိုင်းပဲပြောဆိုဆက်ဆံနေ
ကြတာပါပဲ..." လို့ သူမကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးလူဦးရေငါးသန်းရှိသော စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် အများအားဖြင့်ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ
များမှနိုင်ငံခြားသားအိမ်ဖော် ၂ သိန်းနီးပါးလာရောက်လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်...
မိမိရဲ့ အလုပ်ရှင်နဲ့ မိသားစုကို တစ်ကယ့် စေတနာအမှန်နဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်၊ ပြုစုစောင့် ရှောက်ပေး
ဒီလိုမျိူးရှိတော့ ရှိတယ်...အလွန်ပဲရှားပါတယ်ပေါ့ ဗျာ....
A Filipina maid inherited six million Singapore dollars (more than four million US) from her late employer after more than 20 years of service.“I am the luckiest maid in Singapore, with or without the money,” the 47-year-old single woman — identified only by the pseudonym “Christine” — told the Straits Times in an interview. The maid refused to be named in public for fear of possible threats to her life in the impoverished Philippines, where wealthy people have been kidnapped for ransom and some killed by their abductors.
“There were no secrets between us. I was not surprised at all when she told me how much I was going to get,” the maid recalled.
“Christine” was devastated when Quek diedayear ago, as the two were inseparable, and temporarily moved in with the doctor’s nephew for solace.
“It was heartbreaking for me as I saw more years with Doctor Quek than with my own mother. I would break down every time I thought about her. I could not be by myself,” she said.
“I was always beside her. Wherever she went, I was with her.”
“I do not really think much about the money I got. I just live my life as I did before, and not asarich person,” the maid, dressed simply inablouse and slacks with short-cropped hair, was quoted as saying.
“I am still who I was before. I cannot behave differently because I have money now. Even my Filipino maid friends here still treat me the same.”
Nearly 200,000 foreign maids, mostly from the Philippines and Indonesia, work in affluent Singapore, which hasapopulation of five million.
Posted by Unknown | at 8:14 AM |2comments
The man, 40, who measures only 2ft 6in and is bidd...
A dam big project: Incredible images of constructi...
သိဒ္ဓိရှင် ဆိုင်းဘာဘာရဲ့ လှည့် ကွက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင...
သင်ဘယ်လောက်မြန်မြန်တွေးနိုင်သလဲ.... ** ** ** ...
အရေပြားပေါ်မှအသည်းပုံသဘာဝ အရုပ်လေးများ Love the i...
Ronaldo's RM50 million one-night stand
Polish farmer kept wife as carthorse
108-year-old Malay woman reunites with husband, 38
Bank card with its own keyboard to take on the int...
The occult number of `Paul' is 18!
Cleaner returns RM160,000 left by guest
Model could lose world's biggest breasts title
Paul to Become Honorary Citizen of Spanish Town
Model starts 'beautiful' political party
Mooning fest isabig hit
ဗိုလ်ချူပ်ရဲ့ သြ၀ါဒ.... ဘာမဟုတ်၊ ညာမဟုတ် နိုင်...
Rare condition causes teenager to faint when she s...
Melon sells for £38,000 at auction
Vietnamese flock to see termite 'Buddha'
Striptease show shocks rural China
Owner of Russia's largest breasts, Irene Ferrari, ...
Beauty Mud Cup 2010 Held in China....
Paul picks Spain! The 'oracle octopus' makes his p...
90-year-old man accused of raping4Thai sisters
ဆော်ဒီနိုင်ငံမက္ကာမြို့ မှ ကမ္ဘာ့ ဒုတိယအမြင့် ဆုံးအေ...
World's largest political party
Porn star offers her body as compensation for war ...
Two-headed 'miracle' calf
Five headed snake near Subrahmanya? Fake e-mail chain